Vondrona milisy mamono tantsaha ao amin’ny toeram-pambolena fary ao Filipina, hoy ny iraka mpanamarina ny zavanisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2018 9:36 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 繁體中文, русский, English
Mpikatroka manao hetsi-panoherana eo ivelan'ny departementan'ny fanavaozana ny fambolena sy fiompiana ao amin'ny renivohi-pirenena manameloka ny famonoana tantsaha miisa 9 ao Sagay, Negros. Saripikan'i Anakbayan nahazoana alalana.
Tantsaha sivy, tsy ampy taona ny roa, no maty nisy namono tamin'ny 20 oktobra tao Hacienda Nene, Sagay City ao amin'ny nosy afovoan'i Filipina ao Negros amin'ny lazaina ho fanafihana mahafaty tantsaha mpikatroka ao anatin'izao fitondran'i Rodrigo Duterte.
Notondroin'ny iraka mpanamarina zavamisy tarihan'ny vondrona mpandala ny zon'olombelona sy ny firaisamonim-pirenena ho ny Tafika Sivily Manokana Fanampiny (SCAA), sivily an'olo-tsotra manokana miaraka amin'ny Tafika Mitam-piadiana ao Filipina (AFP), ho ny azo heverina indrindra ho nanao ny famonoana izay nomena anarana hoe “Sagay 9″.
Nanao tifitra variraraka ireo tantsaha avy tamin'ny basilava M-16 ireto mpikambana ao amin'ny vondrona milisy tohanan'ny governemanta ireto nandritra ny fotoana fisakafoanan'ny lasibatra halina tokony ho tamin'ny sivy ora sy sasany tany ho any. Voatatitra fa voatifitra teo amin'ny lohany ny ankamaroan'ireo lasibatra ary notondrahana lasantsy sy nodorana ny vatana telo tamin'izany taoriana.
Ny anatan'ireo lasibatra sy ny taonany dia i Angeliffa Arsenal, 47; Rommel Bantigue, 41; Paterno Baroy, 48; Marcelina Dumaguit; Rene Laurencio Sr.; Morena Mendoza, 48; Eglicerio Villegas, 36; ary ireo tsy ampy taona kosa dia Marchtel Sumicad, 17 sy Joemarie Ughayon Jr., 16. Nisy telo hafa naratra saingy mbola velona.
Notontosaina tamin'ny 24-25 oktobra 2018 ny iraka fanamarinana ny zavamisy izay nahitana ny fandraisana anjaran'ny Foibe Fanarenana ny Kilonga, Arlene Brosas mpikambana kongresy avy amin'ny Antokon'ny Vehivavy Gabriela, Ny Fiarahana Karapatan Nasionaly ho Fampandrosoana ny Zon'ny Vahoaka, ny mpisolovavan'ny Vondrom-Bahoakam-Pirenena, ary Salinlahi.
Iraka fanamarinana ny zavamisy tao amin'ny toerana nisian'ny famonoana olona tao Sagay Negros Andrefana
Fanavaozam-baovao avy ao Negros:
Sary avy ao Sagay9, sehatra nisian'ny famonoana
Ireo lasibatry ny famonoana tao “Sagay 9” dia mpikambana avy ao amin'ny Federasiona Nasionaly Mpiasan'ny Fanaovan-Tsiramamy (NFSW) izay mibodo ampahantany amin'ny 75 hekitara ao amin'ny Hacienda Nene, izay lazain'ny vondrona fa efa natao hozaraina ho an'ny tantsaha tamin'ny programan'ny governemanta fanajariana ny tany.
Vao nanomboka “bungkalan”, programam-piaraha-mamboly sy miompy izay natao hampijoroana ny fitakiany amin'ireo tany tsy mbola voazara ireto tantsaha ireto. Nanomboka namboly legioma ry zareo tamin'ny andro nisian'ny famonoana ahafahan-dry zareo miavo-tena amin'ny “tiempo muerto” na vaninandro maty (maitsoahitra) eo anelanelan'ny fanangonana fary sy ny fotoam-pambolena.
Araka ny nolazain'ny iraka mpanamarina ny zavamisy, malaza amin'ny fanaovana mersenera karamain'ny tompon'ny tany goavana tahaka ny tompon'ny Hacienda Nene antsoina hoe Carmen Tolentino sy i Allan Simbingco izay arriendador-ny na mpanofa manontolo ny tany ireo milisin'ny SCAA ireo. Izy mirahalahy ireo dia havana akaiky an'i Alfredo Marañon Jr., governoran'i Negros Andrefana, sy i Alfredo Marañon III Ben'ny tanànan'i Sagay, .
Negros dia malaza amin'ny mbola fisian'ny haciendas, fitazonan-tany goavana hanaovana fambolena sy fiompiana tamin'ny andron'ny fanjanahantany espaniola azy nampidirina voalohany tao amin'ny nosy hanaovana fambolena fary.
Naharakitra famonoana tantsaha miisa 172, ao anatin'izany ny 45 ao Negros fotsiny, ny NSFW nandritra ny roa taona nitondran'i Duterte teo amin'ny fahefana. Natao hampaharitra ny fepetran-tsindrihazolena ny fandrahonana sy ny herisetra amin'ny tantsaha, hoy ny vondrona:
Amin'ny ankapobeny ny mpiasan'ny fanaovana siramamy ao amin'ny haciendas mandray vola tsy misy dikany P500 ka hatramin'ny P750 ($9.3-$14) isan-kerinandro mandritra ny taona. Napetraka ho eo amin'ny P245 ($4.5) isan'andro ny karaman'ny mpiasan'ny fambolena any amin'ny haciendas maro, saingy mbola ny P80-P120 ($1,5-$2,2) isan'andro ihany no manjaka.
Tamin'ny 21 desambra 2017, notsatohan'ny ahiahiana ho milisy ho faty i Flora Jemola, filohan'ny NFSW ao an-tanànan'i Sagay. Novonoina tamin'ny 22 febroary 2018 i Ronald Manlanat, mpikambana ao amin'ny NFSW ao amin'ny Hacienda Joefred ao an-tanànan'i Sagay. Notaperina tamin'ny lohan'i Manlanat ny taranjany iray manontolon'ny bola M-16 iray.
Ny Fandripahana tao Sagay no faha-13 tamin'ity fitondrana ity.
Taorian'ny fandripahana tao Sagay, dia niray feo avokoa ny mpitondratenin'ny governemanta, miaramila sy polisy, amin'ny fiampangana ny Antoko Komonista ao Filipina (CPP), ny sambana mitam-piadiana ao amin'ny Tafi-Bahoaka Vaovao (NPA), ary ny NSFW ihany ho nanao ny famonoana.
Nanao fitoriana maro ny Philippine National Police (PNP) [polisy Nasionalin'i Filipina] hanenjehana an'i Rene Manlangit sy Rogelio Arquillo, mpitarika sendikaly roa avy ao amin'ny NSFW izay lazaina fa mamitaka ny lasibatra amin'ny alalan'ny fanatevenan-daharana ny fibodoana ny tany ho ao anatin'ny tetika maloto hanao izay hahatonga ny fahatafintohinana hamelezana ny governemanta.
Nilaza ny AFP (tafika filipiana) fa io famonoana tantsaha miisa sivy io dia ao anatin'ny “paikady maloto” hanesorana ny Filoha Rodrigo Duterte tsy ho eo amin'ny fahefana. Saingy mitsipaka izany filazana izany ny vondrona mpandala ny zon'olombelona sy ny firaisamonim-pirenena isan-karazany, ary manambara fa mandroso izany fomba fitantarana izany ny manampahefana mba hanafenana ny mahavoarohirohy azy ao amin'ity ra mandriaka ity.
Ny filoha Duterte tenany, tamin'ny kabary nataony tamin'ny 28 Oktobra, no nampitandrina ny tantsaha tafiditra ao anatin'ny fifandirana amin'ny fanavaozana ny fizakan-tany mba hiala amin'ny tany bodoiny, milaza fa efa nanome baiko ny miaramila sy ny polisy izy hisambotra sy hamono ireo mibodo ny fananam-panjakana sy an'olon-tsotra.
Ny baikiko tamin'ny polisy dia ny hitifitra azy ireo. Raha manohitra amin-kery ireo dia tifiro, ary raha maty ireo dia tsy raharahako.
Valiny avy amin'ny Twitter
Rehefa niteny ny miaramilan'i Duterte fa ny NPA no ahiahian-dry zareo voalohany tamin'ny famonoana ny tantsaha miisa 9, ka anatin'izany ny zaza iray, iza no hino azy ireo? Satria inona moa no hamonoan'ny NPA tantsaha? Inona no tombony azony amin'izany? Mandritra izany fotoana izany ireo tompon'ny tany no mahazo tombony amin'ny famoretana ny tantsaha, TSY AHIAHIANA IREO?
“Nijoro aho ary niezaka ny hihazakazaka miverina saingy misioka aoka izany ny bala. Nandady aho, niezaka ny hikisaka araka izay manakaiky ny tany. Nivavaka ho an'ny zanakolahy aho” — Bobstill Sumicad
Ity ny sarintany nataoko ho amin'ny kilasim-panaovan-tsarintaniko. Asehony eo ny halehiben'ny tany ataon'ny tompontany sy ny orinasa goavana ampihimamba. Ao ambadik'izany rehetra izany ny fangirifiriana isan'andro mahazo ny tantsaha.
Ny tsy dia rariny loatra eto amin'ity firenena ity dia eo anilan'ireo avy amin'ny mpamokatra ny sakafontsika vonoina noho ny fijoroana hitaky ny zony, efa taona 2018 isika izao nefa mbola misy hatrany ny haciendas nampidirina tamin'ny andron'ny espaniola
Mpamono tantsaha ny fanjakana!